Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga encinci embindini we-Pays des Lacs - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga encinci embindini we-Pays des Lacs
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguFlorian Et Axelle
UFlorian Et Axelle yi-Superhost
Fumana iJura kumbindi we-Pays des Lacs kwindlu yethu esemaphandleni elungiswe ngokupheleleyo.
Kwimizuzu eyi-15 ukusuka e-Lac de Vouglans, ichibi lesithathu eFransi, kwaye phakathi kwamachibi ehlabathi e-UNESCO e-Clairvaux-les-Lacs kunye neChalain, uza kuhlala imizuzu eyi-10 ukusuka eCascades du Hérisson.
Ayinamkhethe kwaye ijongene nomzantsi, vuselela iibhetri zakho phambi komhlaba ongenazithintelo kangangoko amehlo abona!
Sikunika "indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga encinci" ecaleni kwendlu yethu yeholide eyakhiwe ngamaplanga enkulu.
Ijonge kumzantsi nasentshona, igumbi lokuhlala eliqaqambileyo eliyi-20 miliyoni liquka igumbi lokuhlala nelokutyela.
Ngaphandle koko, ikhitshi elinesitovu, i-microwave, iketile kunye nomatshini wokwenza ikofu, iseti ye-raclette kunye nenye i-fondue set, kunye nayo yonke into oyidingayo ukuze upheke kunye namashiti. Iti nekofu ziyafumaneka.
Ngokwahlukaniswe kwikhitshi elinomnyango otyibilikayo, kwigumbi lokuhlambela uza kufumana ishawari enkulu, i-vanity enesipili nendlu yangasese (asinazo iitawuli).
Ungangena kwigumbi eliseluphahleni ngezitepsi apho igumbi lokulala libekwe khona ibhedi elala abantu ababini (iisentimitha eziyi-140 x 190) kunye nebhedi enye (iisentimitha eziyi-80 x 190). Amashiti aviwe kakuhle kwaye aqukiwe. Ukuba kuyimfuneko, singakunika ibhedi yosana. Kufuneka iqatshelwe into yokuba akukho mnyango phakathi komgangatho osezantsi nomgangatho.
Kukho imidlalo yebhodi kwidrowa yekhabhathi yeTV (UNO, Triomino, njl.).
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga encinci ayinanto yakwenza nendawo yethu yokuhlala, siza kudibana nabantu abangaphandle kuphela ukuba kuyimfuneko.
Sisoloko sivala ubuncinane usuku oluyi-1 ngaphambi nasemva kokubhukisha ngakunye ukuze siqhubeke nokucoca indlu.
4.87 · Izimvo eziyi-101
Umbuki zindwendwe ngu- Florian Et Axelle
Njengoko besisoloko siziqhelanisa noAirbnb iminyaka embalwa eFransi nakwamanye amazwe, siyakuvuyela ukuqhubeka namava njengababuki zindwendwe.
Sihlala "kwindlu esemaphandleni enkulu" esecaleni kwaye siza kufumaneka ukuba kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charcier